DFS oo kasoo horjeesatay qaraarkii Midowga Afrika eedeyna u jeedisay Jabuuti & Kenya | Banaadir Times
HomeUncategorisedDFS oo kasoo horjeesatay qaraarkii Midowga Afrika eedeyna u jeedisay Jabuuti &...
DFS oo kasoo horjeesatay qaraarkii Midowga Afrika eedeyna u jeedisay Jabuuti & Kenya
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda xil gaarsiinta Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ka hadlay qodobadii kasoo baxay Shirkii Golaha Amniga & Nabadda ee Midowga Afrika iyo cambaareyntii uu shirka u jeediyay muddo kororsiga ay sameeyeen Golaha Shacabka.
Wasiirka oo Warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in marka hore ay soo dhaweeynayaan Ergeyga Midowga Afrika uu u soo magacaabayo Soomaaliya, balse uu sheegay in qaar kamid ah Go’aanada shirka aysan aqbaleyn, kuwaas oo ay kamid yihiin
1: In aysan soo dhaweyneyn cambaareynta Midowga Afrika ee Go’aanka Golaha Shacabka, isla markaana aysan jirin Urur cambaareyn karo dal madax banaan, taasina ay tahay mid sharci darro ah.
2: In ay kasoo horjeedaan qodobka ah in Ciidamada AMISOM ay la socdaan dhaq dhaqaaqa Ciidamada Dowladda Soomaaliya, taasina ay tahay mid ka hor imaaneysa waajibaadka shaqo ee AMISOM ee ah qaraarka 2568 ee ka soo baxay golaha amaanka ee Qaramada midoobay.
Wasiirka Warfaafita ayaa mar kale eedayn u jeediyey waddamada Kenya iyo Jabuuti oo uu ku eedeeyey inay faragelin ku sameeyeen go’aankii ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadda Afrika, waxaana uu si cad u sheegay in aysan ku kalsoonaan karin shirar ay gudoomiyaan dalal ay xurguf kala dhaxeyso Soomaaliya.
Previous articleMaamulka Koonfur Galbeed & AMISOM oo ka wada hadlay la-dagaalanka Al-Shabaab
Next articleDhaq dhaqaaqyo Ciidan oo xalay laga dareemay Xaafadaha Waqooyi ee Muqdisho